Ogaysiiis Dhamaan Ardayda: Sahalsoftware Boosaaso Fursad Waxbarasho English free | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
#College #Sahalsoftware #Boosaaso
#Barro #English language #Si #Bilaash ah oon aan fii lagaa qaadayn, marka laga reebo isdiiwaangelin kooban. Qaababka uu dadku baran karo waa #Regular #Distance #Bosaso.
Hadii aad in badan aad raadinaysay in aad barato luuqada Englishka oo loo diyaarshay nidaam u habaysan in Soomaalida wax lagu baro? Hadii aad doonaysay in muddo kooban aad ku baratid luuqada English?
Hadii aad u la’ayd waqti aad galaaska xaadirtu?
Hadii ay kugu adkayd in aad bixiso fii joogta ah?
Hadii aad doonaysay in aad heshid buugaag adiga laguu diyaarshay oo heer walba oo aad maraysid ku salaysan, Hadaba SahalSoftware college #Bosaso, waxaa idinkugu diyaara barnaamijkaas oo ay raacaan maqal iyo muuqaal, ayna dhigi doonaan macalimiin aqoontoodu aad u sarayso:
– English Department:
#Saddexdaas heer oo horre kiiba waxaa ku dhigan doontaa bil iyo bar; taaso oo celcelis aad ku dhamayn doontid 5 bilood. Markaas kadib waxaad bilaabi kartaa Labaadaan barnaamij ee hoose.
Hadii aad ku dartid kuwaan waxaad #Diploma ka qaadan doontaa luuqada Englishka.
Hadaba isdiiwaangelintu iminka waa ay socotaa, SahalSoftware #Bosaso, wuxuu la simanyahay daartii hore Nakhiiil, laamiga gaaca, kasoo horjeedka gufure spare parts.
wixii faah-faahin intaas dheer nalasoo xiriir: 05828890/ 6793748/ 7721990
Eng Abyad Ali Khadar
#LIKE_Comments_Share – Nagu Taageer